Dowlada Itoobiya Oo Digniin Cusub U Dirtay Ururka ONLF – somalilandtoday.com
(SLT-Addis Ababa)-Guddiga Doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqay inay tirtireen shahaadada xisbinimadooda, kuwaasi oo kamid ahaa xisbiyada siyaasada ee ka jira dalkaas oo hore aqoonsi u haystay.
Xisbiyada la tirtiray ayaa la sheegay in ayna buuxin shuruudaha jiritaankooda, taasi oo keentay in guddiga doorashooyinka Itoobiya uu gebi ahaanb meesha ka saaro.
Guddiga ayaa sidoo kale digniin u diray 12 Xisbi oo ay sheegtay inay ka dhiman yihiin shuruudihii loo baahna, iyada oo digniin u dirtay inay sida uga dhaqsaha badan usoo buuxiyaan, ka hor inta aan laga gaadhin go’aan.
Xisbiyada digniinta loo diray ayaa waxa kamid ah ururka caanka ah ee ONLF ama Jabhadda xoraynta Ogaadeeniya – (Ogaden National Liberation Front), kaasi oo waayi kara xisbinimadiisa haddii aanu buuxin shuruudaha ka dhiman, sida uu sheegay guddigu.
Sidoo kale waxa kamid ah xisbiyada la tirtiray ee uu guddigu sheegay in ayna buuxin shuruudihii looga baahna laba xisbi oo ka jira deegaanka Soomaalida, kuwaas oo kala ah; Xisbiga Waddaniga ah ee Soomaalida – (Somali Patriotic Party: SPP) iyo Xisbiga Midowga Dimuqraaddiga ah ee deegaanka Soomaalida – (Somali Regional Democratic Union: SRDU).